Saamaynta gubashada ee shaashadda: Maxay tahay sideese looga hortagi karaa? Androidsis
Waa maxay saameynta gubashada ee shaashadda taleefanka
Shaashadda taleefanka waa wax aad xasaasi u ah, halkaas oo dhibaatooyin ka dhici karaan mar uun. Cillad ama dhibaato ay u badan tahay isticmaalayaasha qaarkood ee ku shaqeeya Android waligaa soo maray saameynta gubashada ama saameyn gubasho, sida loo yaqaan sidoo kale xaalado badan. Waxaan ka hadli doonaa saameyntaan hoos.
Wax badan ayaan kaaga sheegeynaa, ee tag inaad waxbadan ka ogaato saameynta gubashada shaashadda taleefanka. Sidoo kale tafaasiisha qaar si loo tixgeliyo, si looga hortago, ugu yaraan intii suurtogal ah, maadaama aysan had iyo jeer ahayn wax aan wax badan qaban karno si looga hortago inay ka soo baxdo taleefanka.
1 Waa maxay saameynta gubashada
2 Maxay saameyntani u soo baxeysaa
3 Sida loo hagaajiyo saamaynta gubashada-in ee telefoonka
Waa maxay saameynta gubashada
Waxaan ku ognahay saameynta gubashada, oo sidoo kale loogu yeero xaalado badan gubashada-saamaynta ama shaashadda cirfiidka, in midab joogto ah ama waarta ee shaashadda taleefanka. Saameyntan waxaa sida caadiga ah keena adeegsiga sinnaanta ee pixels shaashadda, marka lagu daro inaad yeelan karto asal kala duwan. Tan iyo markii ay dhici karto marka dhibcaha iftiinka ee soo saara sawirada shaashadda ay lumiyaan xoogooda awgood, xaalado badan awgood adeegsiga dheeraadka ah.
Sidoo kale isticmaal aan caadi ahayn, sida kaligaa qayb kamida shaashadda taleefanka ilaali waqti dheer, waxay sababi kartaa in sawirka shaashadu gubto. Intaas waxaa sii dheer, tani waa wax kiisaska badankood si joogto ah ujoogaan, sidaa darteed saameynta gubashada waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xumo shaashadda.
Sidee shaashadda taleefankaaga Android uu u shaqeeyaa
Telefoonada leh shaashadda OLED ayaa ah kuwa ugu nugul inay ku dhacdo dhibaatada gubashada. In kasta oo ay tahay wax sidoo kale ku dhici kara kiiska taleefannada leh guddi LCD ah, laakiin waxay u egtahay inay ku soo noqnoqoto si aan macno lahayn. Sidoo kale, hadda oo badhanka badhanka ay ku milmaan shaashadda taleefanka, waa ka caadi.
Maxay saameyntani u soo baxeysaa
Sababaha uu taleefanka ugu dhammaado dhibaatada saameynta gubashada aad ayey u kala duwan yihiin. Ma jirto hal sabab oo keliya oo mas'uul ka ah inay tani ku dhacdo taleefannada. In kasta oo ay jiraan ficillo gaar ah ama sababo suurtagal ah, kuwaas oo lagu talinayo in laga fogaado in lagu sameeyo taleefanka, maadaama ay gacan ka geysan karaan saameyntan ka soo baxda shaashadda qalabka.
Ha yeelin iftiin otomaatig ah
Isticmaalka wali sawirada shaashadda muddo dheer
Isticmaal kaliya qeyb ka mid ah shaashadda (ama ka dhig iftiin kaliya)
Ku hay shaashadda adigoon isticmaalin muddo dheer
Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in laga fogaado ficilka noocan ah, oo ah hab wax ku ool ah oo looga hortago saameynta gubashada ee shaashadda taleefanka. Waxaan arki karnaa in kuwani ay yihiin ficillo aad ufudud, oo lagu jaanqaadi karo Android wakhti kasta. Laakiin waxay gacan ka geystaan ​​in ugu yaraan la yareeyo fursadaha in guuldarradan ay ku dhacdo taleefanka.
Sida loo hagaajiyo saamaynta gubashada-in ee telefoonka
Nasiib darrose, ma jiraan wax run ah oo wax ku ool ah ama xalka saxda ah ee saameynta gubashada shaashadda taleefanka. Xaalado badan, markay dhibaatadani ka dhalato aaladda, calaamaddan la arko, sida tan aan sawirrada ku aragnayba, waa la ilaaliyaa si kasta oo ay tahay. Markaa ma aha wax aan ka hortagi karno ama xallin karno arrintan. Waxay kuxirantahay haday joogto tahay iyo inkale.
Xaalado badan, haddii aysan ahayn mid joogto ah, way noqon kartaa hagaaji setinka taleefanka. Dhinacyada sida maareynta dhalaalka iyo isbarbar dhiga, ku sharadka dejinta goobaha ay ku talisay calaamadda lafteeda, badiyaa iska ilaali dhibaatooyinka ama shaashadda ku soo noqo xaaladdeedii caadiga ahayd. Sidoo kale, waxaa jira barnaamijyo kaa caawin kara.
Google Play waxaan ka helnaa codsiyo kuwaas oo naga caawinaya maareynta tayada shaashadda, ama hagaajinta midabada, haddii ay dhacdo in si qaldan loo saxay natiijada ka soo baxda. Sidan oo kale, waxaan ka dhigi karnaa saameyntan gubashada ah shaashadda, oo waxaan sii wadi karnaa isticmaalka taleefanka si caadi ah. Waa ikhtiyaar kale oo la tixgeliyo maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Waa maxay saameynta gubashada ee shaashadda taleefanka
Waxaan horey u ogaanay qiimaha Samsung Galaxy A30s ee Yurub